Ịtụgharị uche | Ihe Baịbụl Kwuru
“M ga-atụgharị uche n’ọrụ gị dum, m ga na-echebara ihe niile i mere echiche.”—Abụ Ọma 77:12.
E nwere ụzọ dị iche iche ndị Hindu na ndị okpukpe ọzọ yiri ha si akọwa ihe ịtụgharị uche pụtara. Otu onye dere gbasara ịtụgharị uche kwuru na e nweghị ihe ọzọ kwesịrị ịdị onye na-atụgharị uche n’obi ma e wezụga mkpụrụ okwu ahụ ọ chọrọ ịtụgharị uche na ya ma ọ bụ ihe osise ọ na-ele anya. O kwukwara na ime otú ahụ ga-eme ka obi ruo onye ahụ ala ka o nwee ike ịnọ Chineke nso.
Baịbụl gbara anyị ume ka anyị na-atụgharị uche. (1 Timoti 4:15) Ihe Baịbụl na-agwa anyị abụghị na e nweghị ihe ga-adị anyị n’obi mgbe anyị na-atụgharị uche ma ọ bụkwanụ na anyị ga na-ekwughachi otu mkpụrụ okwu n’oge ahụ. Kama, ihe ọ na-agba anyị ume bụ ka anyị na-echebara ihe ndị bara uru echiche dị ka àgwà ndị Chineke nwere, iwu ya, na ihe ndị o kere eke. Devid kpere ekpere, sị: “Atụgharịwo m uche n’ọrụ gị dum; eji m obi m dum na-echebara ọrụ aka gị echiche.” (Abụ Ọma 143:5) Ọ sịkwara: “Mgbe m chetara gị n’elu ihe ndina m, n’oge nche abalị, m na-atụgharị uche banyere gị.”—Abụ Ọma 63:6.
Olee uru ịtụgharị uche ga-abara gị?
“Obi onye ezi omume na-atụgharị uche iji zaa okwu.”—Ilu 15:28.
Ọ bụrụ na anyị na-atụgharị uche otú Baịbụl kwuru, ọ ga-eme ka anyị na-akpa àgwà ọma, na-ejidekwa onwe anyị. Ọ ga-emezi ka anyị na-eme ihe dị mma, na-ekwukwa okwu dị mma. (Ilu 16:23) Uru ọzọ ọ ga-abara anyị bụ na anyị ga na-enwe obi ụtọ, ndụ anyị enweekwa isi. Abụ Ọma 1:3 kwuru na onye na-atụgharị uche n’Okwu Chineke ‘ga-adị ka osisi a kụrụ n’akụkụ iyi, nke na-amị mkpụrụ ya n’oge ya, akwụkwọ ya adịghịkwa akpọnwụ akpọnwụ. Ihe ọ bụla ọ na-eme ga-agakwa nke ọma.’
Ịtụgharị uche na-eme ka anyị ghọta ihe ọ bụla anyị mụrụ, ọ na-enyekwara anyị aka icheta ya. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na anyị amụọ gbasara ihe Chineke kere ma ọ bụkwanụ akụkọ a kọrọ na Baịbụl, anyị nwere ike ịmụta ihe ndị anyị na-amabughị. Ma, anyị nọdụ ala tụgharịa uche n’ihe ndị ahụ anyị mụtara, anyị ga-ahụ otú ha si gbasa ibe ha nakwa otú ha si gbasa ihe ndị anyị mụtara n’oge gara aga. N’ihi ya, anyị tụgharịa uche n’ihe dị iche iche anyị mụrụ, anyị aghọtakwuo ihe Baịbụl na-ekwu.
Olee ihe anyị kwesịrị ịna-atụgharị n’uche?
“Obi dị aghụghọ karịa ihe ọ bụla ọzọ, o sikwara ike njite. Ònye pụrụ ịmara ya?”—Jeremaya 17:9.
‘Ọ bụ n’ime mmadụ, n’obi ụmụ mmadụ, ka echiche ọjọọ dị iche iche si apụta: ịkwa iko, izu ohi, igbu ọchụ, ịkwa iko nke di ma ọ bụ nwunye, inwe anyaukwu, ajọ omume, aghụghọ, omume rụrụ arụ, anyaụfụ, na enweghị ezi uche.’ (Mak 7:21, 22) N’ihi ya, ọ bụghị ihe ọ bụla ka anyị kwesịrị ịna-atụgharị n’uche anyị. Ọ bụrụ na mmadụ akpacharaghị anya, o nwere ike tụgharịwa uche n’ihe ga-eme ka o mee ihe ọjọọ.—Jems 1:14, 15.
Ka a sịkwa ihe mere Baịbụl ji gbaa anyị ume ka anyị na-atụgharị uche ‘n’ihe ọ bụla nke bụ́ eziokwu, ihe ọ bụla nke ziri ezi, ihe ọ bụla nke dị ọcha, ihe ọ bụla nke na-akpali ịhụnanya, ihe ọ bụla nke a na-ekwu okwu ọma banyere ya, omume ọma ọ bụla dịnụ na ihe ọ bụla dịnụ nke kwesịrị otuto.’ (Ndị Filipaị 4:8, 9) Ọ bụrụ na anyị na-atụgharị uche n’ihe ndị ahụ dị mma, meekwa ka ha dị n’obi anyị, anyị ga na-akpa àgwà ọma, na-ekwu okwu ọma, anyị na ndị mmadụ ga na-adịkwa ná mma.—Ndị Kọlọsi 4:6.
mailto:?body=Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ịtụgharị Uche?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102014167%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ịtụgharị Uche?